‘अदालतको भर छैन, सडकबाटै सं‌सद पुनर्स्थापना’ - Kohalpur Trends
‘अदालतको भर छैन, सडकबाटै सं‌सद पुनर्स्थापना’
१२ पुस, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बताएको छ ।
संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सरकारले असंवैधानिक कदम चालेकाले त्यसविरुद्ध सडक संघर्ष नै गर्नुपर्ने जसपाका नेताहरुले बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै जसपाले संयुक्त आन्दोलनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रचण्ड–माधव समूह र नेपाली कांग्रेसलाई पनि सहकार्यकार प्रस्ताव राखेको छ ।
जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले न्यायालयबाट संसद विघटनको निर्णय बदर हुनेमा आशावादी भए पनि पुरै भर पर्न नसकिने बताए । ‘अदालतबाट आशा त गरौं, तर भर गर्ने ठाउँ छैन । किनकी अदालत जहिले पनि सार तत्वमा जाँदैन । न्याय दिने भन्दा विधि प्रमाण पु¥याउनेतिर जान्छ’ भट्टराईले भने ।
संसद विघटनको कदमलाई प्रतिगमन भन्दै जनआन्दोलनविना यो सच्चिने अवस्था नरहेको बताए । ‘संयुक्त जनआन्दोलन बिना यो प्रतिगमन सच्चिनेवाला छैन’ उनले भने, ‘राजा महेन्द्रको प्रतिगमन हटाउन ३० वर्ष लाग्यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन ४ वर्षभित्रै सडकबाटै गुल्ट्यायौँ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले सडक आन्दोलनमार्फत अहिलेको कदमलाई केही महिनामै उल्ट्याउन सकिने पनि बताए । ‘कांग्रेस र अरु साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, न्यायालयबाट आश गरौं, ढुक्क नबनौं’ डा. भट्टराईले भनेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गराउने भ्रममा नबस्नसमेत प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई आग्रह गरेका छन् । ‘चुनाव हुन्छ र चुनावमा गएपछि कांग्रेस ठूलो पार्टी हुन्छ र सरकार चलाउँछौं भन्ने भ्रममा नपर्नुस्’ भट्टराईको सुझाव छ ।
उनले अघि भने, ‘चुनाव भ्रममात्र हो, आफ्नो निरंकुश शासन गर्ने ध्येयले चुनावको कुरा गरेका छन् । आफ्नो प्रभुत्व पुरै कायम गरेको विश्वास नभएसम्म चुनाव हुन्न ।’
पञ्चायतमा राजाले चुनाव गर्दा पनि आफूहरु सहभागी नभएको स्मरण गर्दै भट्टराईले भने, ‘पञ्चायतले चुनाव गराएको थियो । भाग लिएनौँ । यो चुनाव विषको घैँटामा माथिल्तिर अलिकति अमृत राखे जस्तो हो । त्यो माथि राखिएको अमृतमा भुल्नुहुदैन । चुनाव भ्रम हो ।’
भट्टराईले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पनि आन्दोलन आउन आग्रह गरे ।
‘सभामुखले संसद बोलाउनुपर्छ’
भट्टराईले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताउँदै उनले तत्काल बैठक बोलाउन सभामुखसँग माग गरे ।
सभामुखले बैठक बोलाए आफूहरुले त्यहीँबाट फैसला गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अत्याधिक सांसदहरु विघटन गलत छन् भन्ने पक्षमा छन् । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेर बैठक बोलाउनुपर्छ र, हामीले फैसला गरौं’ डा. भट्टराईले भने ।
राजेन्द्र महतोको प्रश्न : कति प्रतिगमन भोग्नुपर्ने हो ?
जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले नेपाली जनताले पटक पटक प्रतिगमन भोगिसकेको उल्लेख गर्दै अझै कति प्रतिगमन भोग्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
‘केपी ओलीले संविधानमा प्रतिगनम गरे । तर यो पहिलो पटक होइन’, उनले भने, ‘पहिले राजाले गर्थे, अहिले नयाँ राजाले गरे । फेरि प्रतिगमन, कति प्रतिगमन, कति नेपाली जनताले कति प्रतिगमन भोग्नुपर्ने हो ?’
ओलीको कदम ०१७ सालको भन्दा पनि निन्दनीय : अशोक राई
जसपाका नेता अशोक राईले संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरे भन्दा अहिलेको संसद विघटन निन्दनीय भएको बताए । अहिले ओली पक्षधर भन्दा बाहेक सबै संसद विघटनको विरोधमा रहेको उनको भनाइ छ ।
ओलीले पार्टी र संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत नरहेको र संसद बोलाउँदा असुरक्षित हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको राईले बताए ।
Previous Previous post: कञ्चनपुरमा वृद्धा मृत फेला, हत्याको आशंका
Next Next post: नयाँ श्रममन्त्री : काम नथाल्दै माफी माग्न तयार !
अमेरिकी राष्ट्रपतिले पठाए ओलीलाई विशेष खबर,
काठमाडौं । अमेरिकाका ४६ ‍औं राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधवार पद तथा गोपनियताको सपथ लिए । ह्वाइट हाउसमा कार्यभार सम्हाले । बुधवार राती सपथ लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री…